Ahoana ny fomba hanehoana izany sary izany amin'ny fivarotana maro? - Easy Multi Display
Noforonina On Enga anie 28, 2021
10. fitahirizana an-tserasera
Mazava ho azy! Miaraka amin'ny Easy Multi Display ianao dia afaka mampiseho mora foana ilay sary mitovy amin'ny fivarotana maro! Manolotra anao torolàlana haingana sy tsotra izahay hanamboarana ny lahatahiry. Satria serivisy amin'ny Internet ny rahona, dia tokony hitandrina ianao ary hifidy serivisy matotra. Etsy ambany, atolotray anao ireo orinasa mpampiantrano telo malaza indrindra eny an-tsena.
Amin'ity ohatra ity dia hampiasa onedrive fa afaka mampiasa serivisy rahona hafa toa ny Google Drive or Dropbox.
Amboary ny maritrano fampirimana mitovy amin'ny OneDrive (na orinasa mpampiantrano rahona hafa) ho an'ny orinasanao rehetra.
Fanafody amin'ny OneDrive
Avy eo, omeo anarana mitovy amin'ireo rakitra tianao hampiasaina ao amin'ny fivarotanao. Eto izahay dia nantsoinay hoe "Welcome_pharmacie" ny sarinay. Adikao amin'ny lahatahiry roa ity sary ity.
Raha te hanova haingana ny sary sy horonan-tsary ianao amin'ny alàlan'ny findainao na PC anao dia soloinao sary vaovao ilay sary taloha nefa mitazona ny anaran'ny fisie. Tsy mila manova fanovana amin'ny Easy Multi Dislay ianao, hiseho ho azy ny sary vaovao.
Tongasoa pharmacy Biarritz
Tongasoa eto amin'ny fivarotam-panafody Guethary
'Vegas Means Business' dia manamarika doka voalohany amin'ny efijery lehibe Resorts World
Torohevitra 7 hampivelarana takelaka nomerika mahafinaritra